SXAE-412 ngokuzenzakalelayo CNC 4 imibala imishini yokunyathelisa screen (servo machine)-sxaequipment-Chinese,China,Manufacturer,Supplier,Factory,Price
South African Zulu SXAE-412 ngokuzenzakalelayo CNC 4 imibala imishini yokunyathelisa screen (servo machine)
Igama lomkhiqizo: Imishini yokunyathelisa yomsindo we-CNC 4 ngokuzenzakalelayo (umshini we-servo)
i-multifunctional, i-rotary, i-multicolor, yezinto ezinama-cylindrical and oval, ibhodlela le-glass yewayini, ibhodlela lewayini elidakayo, izimbiza zamakilasi, izigubhu zamakilasi, izinkomishi, amakagu njll.
1. Ukulayisha ngokuzenzekelayo uhlelo, i-multi axis robot robot.
2. Ukuhlela i-tableing system, ukunemba okungcono kakhulu.
3. Uhlelo lokunyathelisa okuzenzakalelayo, wonke ama-servo axhunywe: ikhanda lokunyathelisa, uhlaka lwama-mesh, ukujikeleza, isitsha phezulu / phansi, konke okuqhutshwa yi-servo motors.
4. Wonke ama-jig nge-servo motor eqhutshwa, ngokushintshaniswa.
5. Ukushintsha okusheshayo futhi kulula, kusuka komkhiqizo owodwa kuya kwenye. Lungisa imingcele ngokumane nje kwesikrini sokuthinta.
6. Uhlelo lwe-UV lokuphulukisa UV, isikhathi eside sokuphila, ukusindisa amandla.
7. Ukulayishwa ngokuzenzekelayo, i-servo robot.
8. Ukuphepha kokuphepha nge CE.
1. Inhloko ingashintshwa, ikhanda lokushisa elishisayo, ukuphrinta kwesikrini se-multicolor kanye nokushisa okushisayo ndawonye.
Uhlelo lwembono lwekhamera, ngemikhiqizo ye-cylindrical, ngaphandle kwenombolo yokubhalisa, ukubalekela umugqa wokubumba.
Ijubane lokunyathelisa: 1800-2100 Izingxenye / ihora (elungiselelwe ukuma okuhlukile nesithombe sokuphrinta)
Indawo yokunyathelisa: Ububanzi buka 30-90mm, Ubukhulu 80-220mm
Ukucindezelwa komoya okucindezelekile: Ibha 6-8
Ubukhulu bomshini: L 5400 * W 5000 * H 2400mm
Amandla: I-AC 380V, i-3-Phase, i-50Hz / 60Hz, i-23Kw (i-UV evamile), i-5KW (i-UV UV)
ikhono eliphezulu nokusebenza, ukuhlala isikhathi eside isikhathi eside, ukwandisa isikhathi sakho sokujikeleza,
ukunciphisa izindleko zabasebenzi, izindleko ezisebenzayo, izinga le-CE. Ukuphrinta ngokucacile isithombe nesithombe, ukusebenza okulula, ikhwalithi ephezulu yenza ngokwezifiso ngokuzenzakalelayo i-CNC 4 imibala yokunyathelisa ukufakwa kwesikrini se-servo motor system system.
umshini owenza ngokuzenzakalelayo othomathikhi CNC 4 imibala screen ukushicilela servo motor imishini.
ukushintshwa ngokushesha, ukukhiqiza okuphumelelayo,
inkambiso eyenziwe ngokuzenzakalelayo ye-CNC multicolor yokunyathelisa isikrini se-servo system Factory.
phrinta cishe noma iyiphi i-substrate, ukubambelela kahle ne-opacity ink yokunyathelisa,